Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Mgbachi ụlọ elu nke ụgbọ elu Scotland Air Traffic: Enweghị atụmatụ B
Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Njikwa okporo ụzọ Scotland
Ndị ime obodo dị na Highlands na Agwaetiti enweghị nhọrọ nke abụọ ma ọ bụ atụmatụ B maka ọrụ ahụike na ihe mberede nke na -ada ugbu a n'okpuru ụfọdụ ụlọ elu ụgbọ elu Scotland Traffic Control na Highlands na Islands Airports Limited (HIAL) ọdụ ụgbọ elu ndị a ga -emechi. .
Ndị ọrụ ụgbọ njem Europe (ETF) na -achọ ka e mesie ọrụ ATC obi na mpaghara na -enweghị nkwụsị.
ETF na -akọwapụta nke ahụ - na -emegide ihe nwere ike ịdị ka ọnọdụ yiri na London - ọtụtụ ọdụ ụgbọ elu HIAL chọrọ ịnweta ụgbọ elu maka ebumnuche ahụike kwa ụbọchị.
Ọzọkwa, a na -eji ọdụ ụgbọ elu ndị a maka ụdị ọrụ mberede ndị ọzọ.
ETF na -akatọ ebumnuche kacha ọhụrụ nke ụlọ ọrụ HIAL - na -arụ ọdụ ụgbọ elu 11 na ugwu ugwu Scottish, Northern Isles, na Western Isles - nke ibelata ọkwa ọkwa ugbu a. njikwa ikuku ikuku ọrụ na ọdụ ụgbọ elu 6 dị na ugwu na agwaetiti ma na -agbakwụnye ha n'etiti.
N'ime akwụkwọ ozi o degaara minista na -ahụ maka njem na Scotland, Maazị Graeme Dey MSP, ETF, rụtụrụ aka na mkpebi dị otu a ga-akpaghasị obodo ime ime obodo nke dị na mpaghara ugwu ọdịda anyanwụ nke Scotland, ọ bụghị naanị site na mfu nke ọrụ aka ọrụ nke ọma, kamakwa site na ịhapụ ọrụ ndị dị mkpa-dịka ụgbọ elu ahụike - n'ihi adịghị ike nke teknụzụ elu dịpụrụ adịpụ.
ETF na-eche na Gọọmentị Scotland kwesịrị ịda mbà na mmejuputa mkpebi dị otu a ma na-arịọ onye minista na-ahụ maka ụgbọ njem ka ọ leba anya karịa arụmọrụ ọnụ ahịa yana ọnụ ahịa HIAL ma lekwasị anya na nsonaazụ ọjọọ na-adịte aka nke mkpebi dị otú a maka ụmụ amaala ya. , ndị ọrụ, na ọha mmadụ sara mbara na ugwu ugwu na agwaetiti.
Akwụkwọ ahụ na -egosi na ndị ọchịchị si Edinburgh ekwesịghị ichefu ọbụlagodi nke abụọ na nchekwa na nkwalite akụ na ụba nke obodo ndị a kwesịrị ibute ụzọ, ọkachasị n'ihi na ha dabere n'ụgbọ elu maka inwe ọrụ siri ike, a na -akọwapụta ya n'akwụkwọ ozi ETF zigara Minista Ụgbọ njem na Scotland.
Onye odeakwụkwọ ukwu nke ETF, Livia Spera, onye bịanyere aka n'akwụkwọ ozi e degaara ndị ọchịchị Scottish, mere ka o doo anya na na-enweghị nyocha nke ọma mmetụta mmekọrịta ọha na ụba nke mkpebi dị otu a, iwepụ ọrụ mmadụ na-arụ ugbu a ga-emetụta oke obibi ndụ. obodo ndị a na Northwest nke Scotland, ebe ọdụ ụgbọ elu na -arụ ọrụ dị mkpa maka ịdị adị nke ha.